Acrobat Pro डीसी नि: शुल्क कानुनी रूपमा कसरी प्राप्त गर्ने - नि: शुल्क एक्रोबेट प्रो डीसी 2021 संस्करण
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Nepali Blog > Acrobat Pro DC नि: शुल्क
द्वारा Ann Young, Naveen Pokhrel 2021-09-14, Nepali Blog
Acrobat Pro DC नि: शुल्क हेर्न, हस्ताक्षर गर्न र PDF कागजातहरूमा टिप्पणी दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानक अनुप्रयोग हो। एक्रोबेट प्रो डीसीको साथ कागजात कागजातहरूको ढेरहरूको बारेमा बिर्सनुहोस्, पीडीएफ फाइलहरूको साथ कामका लागि उत्तम प्रोग्रामको नयाँ संस्करण।
Acrobat Pro DC का फाइदाहरु
कुनै पनि प्रदर्शनको लागि उपयुक्त
दुई व्यक्तिगत फाईलहरूको सजिलो तुलना
स्मार्ट कागजातहरूमा पहुँच
अपग्रेड गरिएको कार्यक्षमता
कागजात साझा गर्न को लागी सम्भावना
फाइल रूपान्तरण बिभिन्न ढाँचामा
एक्रोबेट प्रो DC परीक्षण संस्करणमा के समावेश छ?
एडोब एक्रोबेट प्रो नि: शुल्क परीक्षण पूर्ण कार्यक्षमताको साथ कार्यक्रमको सबैभन्दा भर्खरको संस्करण प्रदान गर्दछ। साथै, तपाइँ स्मार्टफोनबाट प्रीमियम क्षमताहरू पहुँच गर्न कागजात क्लाउड सेवाहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ।
Acrobat Pro DC नि: शुल्क ट्रायल डाउनलोड गर्नुहोस्
तपाईं PDF मा फाईल रूपान्तरण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र उनीहरूलाई ब्राउजर वा फोनबाट अनुकूलनयोग्य Microsoft Office कागजातहरूको रूपमा निर्यात गर्नुहोस्। तपाईंको एन्ड्रोइड ट्याब्लेट वा आईप्याडलाई पाठ र तस्वीरहरू परिमार्जन गर्न, भर्न, हस्ताक्षर र फारम पठाउन विशेष स्वत: भरिने प्रयोग गर्नुहोस्।
यसबाहेक, तपाईं अन्य प्रयोगकर्ताहरूबाट हस्ताक्षर कागजातहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, टिप्पणीहरू पढ्नुहोस् र नियन्त्रण गर्नुहोस्। यो प्रोग्राम अनलाइन फाइल भण्डारण र साझेदारीको लागि उत्कृष्ट स्थानको रूपमा काम गर्दछ।
यदि एक विद्यार्थीले परीक्षण पछि प्रोग्राम खरीद गर्ने निर्णय गर्छ भने, के उसले छुट पाउनेछ?
हो, शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूले क्रिएटिभ क्लाउड अनुप्रयोगहरूको सम्पूर्ण गुच्छामा %०% छुट पाउन सक्छन्।
एक्रोब्याट डीसीको सदस्यता लिएपछि मैले के प्राप्त गर्ने?
खुला स्रोत एडोब एक्रोबेट प्रो डीसी वा एक्रोब्याट मानक डीसी संस्करणहरूमा मासिक भुक्तान सदस्यतासहित, तपाईं कुनै पनि प्रोग्रामहरू र अतिरिक्त भुक्तानी बिना सबै नयाँ अपडेटहरूको लाभ लिन सक्नुहुनेछ।
एडोब कागजात क्लाउड सेवाहरूले तपाईंलाई एक्रोब्याट रिडर मोबाइल एप्लिकेसनमा उन्नत प्रकार्यहरू प्रयोग गर्ने अवसर दिन्छ र स्मार्टफोनबाट पीडीएफ कागजातहरूको साथ तपाईंको काम सरल बनाउँछ।
के Adobe ले उद्यम तैनातीको साथ आईटी विभागलाई मद्दत पुर्‍याउन उपकरणहरू प्रदान गर्दछ?
हो, प्रशस्त एक्रोब्याट डीसी उपयोगिता र उपकरणहरू उद्यम प्रयोगलाई अनुकूलन गर्न र आईटी लागत प्रबन्ध गर्नमा मद्दत गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। अधिक जानकारीको लागि, जानुहोस् सुरक्षा संसाधनहरू पृष्ठ
के यो ग्राहक समर्थनलाई निःशुल्क परीक्षण अवधिमा सम्पर्क गर्न सम्भव छ?
यदि तपाईंलाई एक्रोब्याट निःशुल्क परीक्षणको साथ समस्या छ भने, एडोब वेबसाइटमा जानुहोस्। त्यहाँ तपाईंले विशेषज्ञहरूको मद्दत लिनुहुनेछ र उपयोगी ट्यूटोरियलहरू, छलफल र सुझावहरू पाउनुहुनेछ। पाउनुहोस् प्राविधिक समर्थन।
जब म Acrobat Pro नि: शुल्क परीक्षणमा छु म Adobe Acrobat Reader को उपयोग गर्न सक्दछु?
प्रारम्भमा, एक्रोब्याट प्रो डीसी पीडीएफ दर्शकको रूपमा छनौट गरियो। रिडर डीसी सक्रिय गरेर र सम्पादनमा क्लिक गरेर यसलाई रिडरमा परिवर्तन गर्नुहोस्; प्राथमिकताहरू & gt; सामान्य त्यसपछि छान्नुहोस् "पूर्वनिर्धारित पीडीएफ ह्यान्डलरको रूपमा चयन गर्नुहोस्" विकल्प र साइटमा निर्देशन अनुसरण गर्नुहोस्।
सहज रूपमा कार्य गर्न एक्रोब्याट DC को लागि न्यूनतम प्रणाली आवश्यकताहरू के छन्?
सफ्टवेयरको प्राविधिक सुविधाहरू वेबसाइटमा विशेष सेक्सनमा फेला पार्नुहोस्। को बारे मा जानकारी जाँच गर्नुहोस् प्रणाली आवश्यकताहरु।
Acrobat Pro डीसी नि: शुल्क क्र्याक गरिएको संस्करण प्रयोगको खतराहरू
धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई थाहा छैन के हुन्छ भनेर थाहा छैन उनीहरूले "फ्री एडोब एक्रोबेट प्रो डाउनलोड" विभिन्न स्रोतहरू र टोरेन्टहरूमा छान्दा।
पाइरेटेड सफ्टवेयर अवैध छ
टोरेन्ट वा अविश्वसनीय स्रोतबाट मुक्त एक्रोब्याट रिडर प्रो स्थापना गर्दै, एक व्यक्ति सजिलै साइबर अपराधको शिकार बन्न सक्छ। त्यस्ता कार्यक्रमहरूको मद्दतले उनीहरूले बैंक खाताहरू, कार्डहरू र भर्चुअल वालेटहरूमा पहुँचको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्दछन्।
थप पढ्नुहोस् बारेमा Adobe Acrobat Pro DC Torrents।
पाइरेटेड सफ्टवेयर सम्भावित जोखिम हो
एक्रोब्याट प्रो डीसी फ्री ह्याकमा कहिलेकाँही भाइरसहरू हुन्छन् भन्ने तथ्यका साथै डाउनलोड गर्ने प्रक्रियाले पनि कठिनाइहरू निम्त्याउन सक्छ। तपाईंले या त SMS सन्देशहरू पठाउनु पर्दछ वा अनजिपिंग वा डाउनलोडको लागि भुक्तान गर्नुपर्दछ, धेरै पपिंग ब्यानरहरू मार्फत जान।
यसका साथै सिफारिश छ कि राम्रो एन्टिभाइरस पहिले नै स्थापना गर्नुपर्दछ (त्यस्ता साइटहरूले प्रोग्राम डाउनलोड गर्नु अघि तपाईंको प्रणालीलाई भाइरसबाट संक्रमित गर्न कोशिस गर्न सक्दछ)।
कानूनी एडोब एक्रोब्याट मानक वा डीसी संस्करणहरू प्रयोग गर्न उत्तम हुन्छ र तपाईंको आफ्नै सुरक्षा र डेटासँग सम्बन्धित सुरक्षाको लागि पूर्ण विश्वास गर्नुहोस्। अप्रमाणित साइटहरूको भ्रमण अनौंठो प्रेषकहरूको ईमेलमा संलग्न फाईलहरू खोल्न मिल्दो छ।
एक इजाजतपत्र प्राप्त कार्यक्रम एक भुक्तान कार्यक्रम बराबर छैन
यो एक साधारण कुरा बुझ्न आवश्यक छ: लाइसेन्स सफ्टवेयर आवश्यक भुक्तान गरिएको छैन।
त्यहाँ कार्यहरूको विस्तृत श्रृंखलाको लागि उपयुक्त विशाल र १००% कानुनी अनुप्रयोगहरूको एक विशाल संख्या अवस्थित छ।
प्राय:, कुञ्जीहरूका लागि नेट खोजी गर्नु र डाउनलोड गरिएको एडोब एक्रोब्याट प्रो नि: शुल्क डाउनलोड गर्नु भन्दा तपाईको कम्प्युटरलाई खतरामा पार्नु भन्दा त्यस्ता अनुप्रयोगहरू भेट्टाउन सजिलो हुन्छ।
पाइरेटेड सफ्टवेयरले अनियन्त्रित उपभोगमा नेतृत्व गर्छ
जब व्यक्तिहरू प्राय: उच्च-गुणवत्ताका उत्पादनहरू प्रयोग गर्छन् उनीहरू बिल्कुल सित्तैंमा पाए, तिनीहरूले मानहरू पुनः विचार गर्न थाल्छन्। मानिसहरुले के तिनीहरु लाई मूल्यवान छैन किनभने तिनीहरू केहि सीमित छैन।
Adobe Acrobat Pro DC डाउनलोड वा कुनै अन्य प्रोग्राम कानूनी रूपमा प्राप्त गर्दै, मानिसहरूले उनीहरूले प्रयोग गर्ने कुराको कदर गर्न थाल्छन्। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, उच्च खरीद मूल्य, उत्पाद प्रति राम्रो मनोवृत्ति। अवश्य पनि, त्यहाँ निर्माताको एकाधिकारसँग सम्बन्धित अपवादहरू छन्, तर यी बिरलै दुर्लभ केसहरू हुन्।
राम्रो उत्पादन समर्थन समर्थन
एक सभ्य उत्पादन खरीद गर्दै, तपाईं यसको अर्को सुधारलाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ। यदि तपाई ह्याक्रोबेट प्रो नि: शुल्क डाउनलोड ह्याक हुनुभयो भने हामी कुनै पनि प्रकारको अपग्रेडको बारेमा कुरा गर्न सक्दैनौं। विकासकर्ताले तपाईका उत्पादनलाई मात्र समर्थन र सुधार गर्दछ जबसम्म यसको लागि पैसा हुन्छ। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई बुझ्दैनन्, तर कुनै प्रोग्राम सिर्जना गर्ने र विकास गर्ने प्रक्रिया कडा मेहनत हो, जसमा धेरै व्यक्तिहरू पनि भुक्तानी गर्न चाहन्छन्।
Best सर्वश्रेष्ठ एक्रोब्याट निःशुल्क विकल्प
यदि तपाईं एडोब डीसी प्रो परीक्षण वा सफ्टवेयर पूर्ण रूपमा खरीद गर्ने विचार गर्नुहुन्न भने, किन नि: शुल्क र विश्वसनीय विकल्पहरूको परीक्षण गर्नुहुन्न?
PDFELEMENT नि: शुल्क परीक्षण प्रयोग गर्नुहोस्
OCR (अप्टिकल वर्ण मान्यता)
मासिक भुक्तान गर्न आवश्यक पर्दैन, तपाइँ एक पटक र सबैको लागि प्रोग्राम खरीद गर्नुहुन्छ
सफ्टवेयरको विषयवस्तु / रंग परिवर्तन गर्न कुनै सम्भावना छैन
पीडीएफलेमेन्ट एडोब Acrobat Proरोको लागि उत्कृष्ट विकल्प हो। उपलब्ध कार्यक्षमताको मद्दतको साथ, तपाईं तुलना गर्न, सम्पादन, टिप्पणी, हस्ताक्षर, सुरक्षित र कागजातहरू पीडीएफमा रूपान्तरण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। सफ्टवेयरले एक उपयोगी पाठक र नोटहरू लिनको लागि उपकरणको रूपमा पनि काम गर्न सक्दछ।
थप पढ्नुहोस् बारेमा एडोब फ्ल्यास प्लेयर नि: शुल्क स्थापना कसरी गर्ने।
PDFMATE PDF कन्भर्टर नि: शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
PDF हरू असंख्य फाईल ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सक्दछ
एकीकृत OCR को लागी धन्यवाद स्क्यान गरिएको फाईललाई अनुकूलन योग्यमा रूपान्तरण
केही पीडीएफ सुविधाहरू
यहाँ अर्को Adobe Acrobat DC स्वतन्त्र वैकल्पिक हो जुन प्रकार्यहरूको सन्तोषजनक सेटको साथ छ। तपाईं सजिलैसँग फाईलहरू पाठ, वर्ड, JPG, EPUB, HTML र SWF ढाँचामा म्याक ओएसमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ। यसबाहेक, OCR सुविधाको साथ, तपाईं स्क्यान गरिएको PDF कागजात रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ। फाईल अनुकूलन र ब्याच रूपान्तरण पनि समर्थित छ।
PDFESCAPE नि: शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
बुकमार्कहरूको साथमा पीडीएफ पाठकको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ
फारमहरू सिर्जना गर्ने क्षमता
अनलाइन संस्करणले अपलोड गरिएको फाईल आकारमा प्रतिबन्धहरू सेट गर्दछ
केही रूपान्तरण प्रकार्यहरू अनुचित रूपमा काम गर्दछन्
त्यहाँ PDFescape का दुई संस्करणहरू छन्। पहिलो फाईल हेर्न र सम्पादन गर्नका लागि वेब सक्षम सफ्टवेयर हो। दोस्रो एक डेस्कटप प्रयोगकर्ताहरूको लागि पूर्ण संस्करण हो। म उत्तरार्द्धलाई रूपान्तरण, पढ्न र सम्पादन गर्नका लागि प्राथमिकता दिनेछु।
डाउनलोड Acrobat Pro DС नि: शुल्क
एक्रोबेट प्रो DС डाउनलोड गर्न को लागी
एडोब (एक्रोब्याट) रिडर * .pdf (एडोब पोर्टेबल कागजात ढाँचा) मा कागजातहरू पढ्न र प्रिन्ट गर्नको लागि सबैभन्दा उत्तम र लोकप्रिय कार्यक्रम हो। एडोब (एक्रोब्याट) रिडरले तपाईंलाई सबै आधारभूत अपरेसनहरू कार्य गर्दछ जब त्यस्ता कागजातहरूको साथ काम गर्दछ: पढ्नुहोस्, प्रतिलिपि गर्नुहोस्, जुम इन र आउट, प्रिन्ट गर्नुहोस्, पृष्ठहरूको अभिमुखिकरण परिवर्तन गर्नुहोस् र अधिक। यस प्रोग्रामको एडोब नि: शुल्क परीक्षण डाउनलोड गर्नुहोस् र पीडीएफ फाइलहरूको प्रबन्धको गति र सहजताको आनन्द लिनुहोस्।
जाँच गर्नुहोस् उपलब्ध एडोब क्रिएटिव क्लाउड छुट।
Acrobat Pro प्रो लाभ